Namoonni maallaqa biyyoota garaagaraa maxxansuuf yaalii taasisan to’annaa jala oolan – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Namoonni maallaqa biyyoota garaagaraa maxxansuuf yaalii taasisan to’annaa jala oolan
On Nov 29, 2021 284
Finfinnee, Sadaasa 20, 2014 (FBC) – Birrii Ityoophiyaa dabalatee namoonni maallaqa biyyoota garaagaraa karaa seeraan alaa maxxansuuf yaalii taasisan to’atamuu ibsame.
Namoonni kunneen lammiilee biyyoota alaa ta’uu ibsameera.
Namoonni lammummaan Kaameeruunii fi Kootdiivaar ta’an kunneen magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqoos aanaa 2 mana ciisichaa Amaadoo fi kutaa magaalaa Boolee aanaa 4 mana ciisichaa Addis Biraayit jedhaman keessatti to’annaa jala oolu eerameera.
Eeeruu Tajaajilli Nageenya Odeeffannoo Biyyaalessaa Komishinii Poolisii magaalaa Finfinneef kenneen namoonni kunneen to’atamuu ibsameera.
Namoota kunneen waliin Birrii Ityoophiyaa seera qabeessa kuma dhibba 1 fi kuma 7 fi 330, maallaqa biyyoota garaagaraa, Birrii Abbaa 200 forjiidii hedduu, keemikaalaa daakuu fakkaatu, keemikaala dhangala’oo, murtuu waraqaa, Boronqiiwwan, waraqaawan, bilbilawwan 9 fi meeshaalee biroon to’atamuu komishiniin Poolisii magaalaa Finfinnee ibseera.